नबोल्ने समाजमा चकचक गरिरहेको लाटीको छोरो !| The Margin Media
शनिबार ०७ जेठ, २०७९ | Saturday, May 21, 2022 |
शनिबार ०७ जेठ, २०७९ | Saturday, May 21, 2022
तस्वीर : द मार्जिन
म काठमाडौँ पुगे भने भृकुटीमण्डप पुग्थे । पुग्छु । पुगिरहने छु । भृकुटीमण्डप मलाई सामूहिक विवाह मण्डप जस्तो लाग्छ । के हुँदैन र त्यहाँ ? को भेटिँदैन र त्यहाँ ?
तरुनीको हाँसोको लय समाएर एकछिन भएपनि हाँसिरहेका नेपाली पासपोर्टहरू ।
नारायण गोपालका पदचाप पछ्याइरहेका हार्मोनियमहरू ।
गालिबको गजलका तखल्लुस बन्न चाहनेहरू ।
स्वदेशमा उत्पादन गर्छु भन्ने मेसिनहरू ।
फिल्म क्षेत्रमा अब आउने क्यामेराहरू । अनि मुकुन्देले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त प्रत्यक्ष हेर्न चाहनेहरू ।
यति सब भेटिने ठाउँमा अरिङाल , मौरी , छेपरा र भेडा नभेटिने कुरा पनि त भएन ।
मण्डप गएर मौका मिलेसम्म र मान्छे चिनेसम्म म यस्तै यस्तै टेबलमा बस्थेँ । बस्छु र बस्नेछु ।
दुई हजार चौरहत्तर साल तिरको कुरा हो । एक दिन लड्दै र पड्दै , म भृकुटी मण्डप पुगेको थिएन । कविका प्रवक्तानै मानिने चन्द्रवीर तुम्बाप्पो एक्लै बसिरहेको देखेँ । सायद मनमनै कविता कथिरहेका थिए होला । मेरो नमस्तेले कविवरको ध्यान भङ्ग गरिदियो । उनी कसैको ईन्तजारमा रहेछन् । कसको. त्यो उनलाई पनि थाहा थिएन । यस्तो भनौँ जो उनको अगाडी पुग्यो उनी उसैको इन्तजारमा हुन्छन् ।
हाम्रा कुरा भए- The vulture and the little girl. तर, हाम्रो यस्तो कुरा चाहिँ भएन भल्चर र केटी दुवै भोका पो थिए कि ।
हाम्रो कुरा भएको थियो । किम जुङ यति क्रूर किन छ ? तर हामीले कुरा गरेनौ आत्म सम्मानको लडाइँले बनाउने भनेकै क्रूर हो भनेर ।
नेपाली राजनीतिको कुरा आउँदा हाम्रो कुरा भएको थियो । चोर चोरहरू मध्य कम चोर्ने चोर छान्न सक्नु नै नेपाली जनताको जित हो भन्ने ।
त्यो दिन हाम्रो कुरा बुद्धको जन्मदेखि लिएर साहिर र अमृताको प्रेम हेरेर भर्जिनिया उल्पको मृत्युसँगै सकिएको थियो ।
कुरा सकेर छुट्टिनै लाग्दा । कविवरले आशीर्वाद दिए झैँ गरी भन्नू भयो- 'लौ यो किताब पढ त ।' उनले किताब टेबुलमाथि राखे ।
मैले पढे- 'अब्बा ।' श्याम साह ।
मैले पनि किताब झोलामा राखेँ । खुसी थिए (त्यो किस्सा आज यहाँ भन्ने हो भने आज भन्न खोजेको कुरा छुट्न जान्छ । त्यसैले त्यो कुनै अर्को दिन ।)
कोठा पुगेर झोला भित्ताको किलामा टङियो । त्यो मैले उपहारस्वरूप पाएको दोस्रो किताब थियो । जुन टङिरह्यो ।
कालिकोट मान्मको हावाले पहिलो चोटि देख्यो तराईको लु । पाना पल्टाउँदै जान्छु गर्मी बढ्दै जान्छ । पाना पल्टाउँदै जान्छु गर्मी बढ्दै जान्छ । गर्मी कस्तो खालको थियो त्यो थाहा पाउन अब्बा खोजेरै पढ्नुस् है । चन्द्रवीर दाइ धन्यवाद है । (अब्बा बारे फेरि मौका मिले अर्को पल्ट लेखौँला ।)
तर त्यही अब्बा भित्रको एक कथा (लाटीको छोरो) अहिले सिनामंगलस्थित पुरानो घर भित्र चकचक गरिरहेको छ । नाटक हेर्दै जाँदा लाग्छ मानौँ कि लाटिले अस्टाबक्रनै जन्माउँदै छे । गर्भभित्रबाट नै लाटिको छोरोले यो समाजको खिल्ली उडाउँछ ।
बोल्ने भएपछि के भन्दै हिँड्छ थाहा छ ? - म लाटीको छोरो हुँ ।
नाटक सुरु हुन्छ एक तन्नेरी डुम आफूलाई जग्गा विहीन बनाउने बाठा भनिने ठगसँग बाझाबाझ गरिरहेको हुन्छ । डुम केटाको मुखिया मरेको छ, उसको सङ्ख्या छ । उसलाई मारिएको हो मार्ने को ? अहिलेको जग्गा प्लटिङ गर्दै हिँड्ने कानुन, व्यापारी, नेता र बुद्धिजीवी ? यो सब थाहा पाएको समाज बोल्दैन ।
बुद्धिजीवी, व्यापारी, नेता, कानुनको चाकरी गरिरहेको समाज उनीहरूको कर्तुत देख्दा बढीमा चाकरी गर्न छोड्छ तर त्यसको विरुद्धमा बोल्दैन ।
पटकपटक बलात्कार हुँदा देखिरहेको समाज - 'बलात्कार भएकी होस् भने खै त भुँडी बोकेकी ?' भन्ने सम्मको कुरा सुनेर पनि चुप बस्छ समाज ।
बलात्कार भएर पनि भुँडी नबोकी हुँदा एक नारी ठग, बौलाहा र बोक्सी बन्न विवश दृश्य हेरेर पनि चुप बस्न सक्छ समाज ।
कानुनको टाउको नेताको खुट्टामा र कानुनको खुट्टा जनताको पेटमा देखिरहेको समाज बोल्दै बोल्दैन ।
नाटकले लाटीको आवाज नहुनु भन्दा पनि समाज को आवाज नहुँदा के हुन्छ ? भन्ने देखाउन खोजेको छ । नाटक हेर्दै जाँदा तपाईँ एकपटक यस्तो दृश्य देख्नु हुन्छ । जहाँ समाज आफैँसँग कानेखुसी गरेर बसिरहेको देख्नुहुन्छ । तर तपाईँलाई देख्नासाथ समाज चुप लाग्छ । मात्र एकपल्ट बोल्छ समाज त्यो पनि आफैँसँग । त्यसमाथि तपाईँलाई देख्नासाथ चुप लाग्छ । के भन्ने त्यस्तो समाजलाई ? लाटो कि र? बाठो कि ? कि ढोँगी ?
यी र यस्तै प्रश्नहरू सोधेर लाटीको छोरो चकचक गरिरहेको छ ।
नाटकले यो समाजमा मौलाउँदै गएको बेथिति, थिचोमिचो, छुवाछूत सबै देखाएको छ र यी सबै देखाउने क्रममा कहीँ कतै मानवता जिउँदै छ भन्ने कुरा पनि बडो मीठो गरी देखाउन भ्याएको छ ।
नाटक सकिदा दर्शकलाई यस्तो सम्म लाग्छ कि- 'म पनि थिए कतै यस नाटक भित्र ?' खासमा दर्शक नाटकमा होइन यही समाजमा छ । तर किन बोल्दैन ? यही मौनताको उपज हो- लाटीको छोरो ।
नोट: नाटक लाटिको छोरो सिनामंगलस्थित पुरानो घरमा मञ्चन भइरहेको छ ।
हरेक साँझ पाँच बजेदेखि ।
एउटा सर्जकका निम्ति ‘नयाँ कृति’ आउनु भनेको छोरी पाउनुजस्तै हो लाग्छ
एकेडेमीको रमिता : फागुन ४५६
कविता - ओ ढोँगी मान्छे !
माघ २१, २०७८ शुक्रबार
त्यतिबेला संकलन गरेको १०१ शेर
माघ २०, २०७८ बिहिबार
मोतीराम भट्ट र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका एक-एक गजल
कविता - यौटा उदास रातमा
कविता - कविको निमित्त एउटा कविता
कविता - मेरी कविता अनशनमा छे
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा आज मतगणना गरिने